जापानमा बस्ने Typ प्रकारहरू: होटल, र्योकन, शुकुबो आदि। Best of Japan
जापानको कावागुचिको तालको नजिक विन्डो रिसोर्टमा सुन्दर माउन्ट फुजी दृश्य। जाडो, यात्रा, छुट्टी र छुट्टी जापान मा = शटरस्टक
जापान मा आवास बुक कसरी गर्ने! >
तपाईको यात्रालाई रमाईलो बनाउनको लागि, म आशा गर्दछु कि आवास तपाईको लागि उपयुक्त बक गर्न सक्नुहुन्छ। जापानमा करीव चार प्रकारका आवास सुविधाहरू छन्। यस पृष्ठमा म उनीहरूको सिंहावलोकन प्रस्तुत गर्नेछु। आवास सुविधा कसरी बुक गर्ने भनेर कृपया तल मेरो लेखलाई सन्दर्भित गर्नुहोस्।
र्योकन (जापानी शैलीको होटल）
जापान मा एक लक्जरी होटल मा एक कोठा = शटरस्टक
जापानका प्रमुख शहरहरूमा धेरै लक्जरी होटलहरू छन्। ती होटेलहरूमा धेरै केसहरूमा जुम्ल्याहा कोठाहरू डबल कोठाको सट्टा मुख्य हुन्छन्। तपाईले मूल रूपमा होटेलमा चिप्स हाल्नु आवश्यक पर्दैन।
दरबन्दी संग लक्जरी होटल बिस्तारै जापानमा पनि बढ्दैछ। मैले बारम्बार अन्तर्वार्ता लिएको छु। तिनीहरू युरोपेली दरबन्दीहरूको तुलनामा जवान छन्, तर तिनीहरूसँग उच्च व्यावसायिक चेतना र आतिथ्य भावनाहरू छन्। कृपया उनीहरूसँग कुरा गर्न नहिचकिचाउनुहोस् उनीहरू उपयोगी हुन चाहन्छन्।
>> कृपया द्वारपालको बारेमा यस लेख हेर्नुहोस्
हालसालै नियमित फ्लोरको अतिरिक्त थेरe विशेष क्लब फ्लोरहरू तयार गर्न बढी होटलहरू हुन्। क्लब फ्लोरको कोठा अधिक रमणीय छ। क्लब फ्लोरमा बुकिंग गरेर, तपाईं क्लब फ्लोर लाउन्जमा रिसेप्शनको सट्टा चेक इन गर्न सक्नुहुनेछ। लाउन्जमा तपाईं नि: शुल्क पेय सेवा र बिहानको खाजा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
स्पा शहर मा लक्जरी होटल विलासी सार्वजनिक स्नानगृह संग सुसज्जित छन्। केही होटलहरूमा, अतिथि नुहाउने तातो स्प्रि .हरू पनि हुन्। केही होटल प्रत्येक अतिथि कोठा को लागी बाहिरका स्नान गर्दछ।
एक सामान्य सानो व्यापार होटल कोठा जुन सस्तो र व्यापार यात्रा = शटरस्टकमा दुई रात खर्च गर्न उपयुक्त छ
व्यापार होटलको अतिथि कोठामा, "स्नान बाथ" सानो स्नान र शौचालय एकीकृत साथ स्थापित छ = शटरस्टक
जापानमा "व्यवसाय होटल" भनिने यति धेरै होटलहरू छन्। ब्यापार होटेलहरू यात्रा गर्ने व्यापारीहरूका लागि बनाइन्छ। धेरै कोठा एकल कोठा हुन्। जहाँसम्म, होटेलमा डबल साइजको ओछ्यान भएको एकल कोठा छ भने, दुई व्यक्तिले यसलाई प्रयोग गर्न सक्दछन्। यी कोठाहरू धेरै साना छन्, लगभग १० - २० वर्ग मिटर। प्रत्येक कोठामा नुहाउने र शौचालयको साथ "एकाई स्नान" हुन्छ।
व्यापार होटेलको कोठा साँघुरो छ, तर धेरै केसहरूमा तिनीहरू धेरै स्वच्छ र परिष्कृत छन्। त्यहाँ टिभी, एक मिनी फ्रिज र सानो लिखित डेस्क छ। कपाल ड्रायर, शैम्पू, टूथब्रश आदि पनि प्रदान गरिएको छ।
त्यहाँ दुबै कोठा र जुम्ल्याहा कोठा प्रस्ताव गर्ने धेरै होटलहरू छन्। भर्खर, धेरै जुम्ल्याहा र डबल नयाँ होटलहरू विदेशबाट आएका पर्यटकहरूको लागि बढ्दो छ। केही होटलहरुमा सार्वजनिक स्नान हुन्छ।
आवास को लागत क्षेत्र मा निर्भर पूरै फरक हुन्छ। टोकियो र ओसाकाको सन्दर्भमा होटेल शुल्क सामान्यतया बढी हुन्छ, त्यसैले यी होटलहरूको होटल बस्ने शुल्क 5,000,००० येन, १,1,5000००० येन हुनेछ। त्यहाँ प्रीपेड शुल्कको साथ धेरै होटलहरू छन्।
टोकियो र ओसाकामा शटरस्टकमा बढी आरामदायक क्याप्सुल होटलहरू छन्
ओसाकामा १ 1979। In मा पहिलो पटक देखा परेको क्याप्सल होटेल। यो माथि चित्रमा देख्न सकिन्छ, पाहुनाहरू क्रमश: क्याप्सुल आकारको अन्तरिक्षमा बस्छन्।
क्याप्सुल कोठा मूल रूपमा अग्रिम प्रीपेड छ। यी होटलहरूमा सार्वजनिक स्नान, नुहाउने कोठा, पाउडर कोठा, शौचालय कोठा, लाउंज र भेन्डि machine मेशिन समावेश छ।
प्रत्येक क्याप्सूल कानून द्वारा लक गर्न सकिदैन। क्याप्सूल पुरुष र महिला बीच विभाजित छन्। अक्सर पुरुष र महिलाहरूको छुट्टै फ्लोर हुन्छन्। हालसालै, क्याप्सूल होटल महिलालाई समर्पित पनि देखा परेका छन्।
हालसालै जापानमा विदेशबाट आएका पर्यटकहरूको संख्या धेरै बढेको छ। नयाँ गेस्ट हाउसहरू अधिक देखि अधिक देखा पर्दैछन् ताकि ती पाहुनाहरू आराम र उचित ढंगले रहन सक्दछन्। तिनीहरूले आन्तरिक र फिक्स्चरहरू पनि डिजाइन गरे ताकि अतिथिहरूले परम्परागत जापानी वातावरणको आनन्द लिन सकून्। धेरै पाहुना घरहरूमा, अतिथिहरूले ब b्क बेडहरू साझा गर्छन्।
क्याप्सूल होटेलमा, तपाईं भविष्यका रहस्यमय वातावरणको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ, तर तपाईं लामो समय एक्लै बिताउनुहुनेछ। अर्कोतर्फ, पाहुनाहरू प्रायः गेस्ट हाउसमा एक अर्कासँग कुरा गर्छन्। यो पक्कै पनि रमाइलो यात्रा हुनेछ!
जापानमा, जापानी शैली कोठा प्रस्ताव गर्ने होटलहरुलाई "र्योकन" भनिन्छ। यदि तपाईं जापानी वातावरणको आनन्द लिन चाहानुहुन्छ, तपाईं र्योकनमै बस्न कोशिस गर्न सक्नुहुनेछ।
Ryokan निम्नलिखित तरिकाले होटल भन्दा भिन्न छ।
धेरै Ryokan जापानी बाह्य उपस्थिति को भवनहरु छन्। र यो भवनमा जापानी शैलीको आन्तरिक पनि हो। धेरै RYokan मा, तपाई आफ्नो जुत्ता प्रवेशद्वारमा बाहिर लानु पर्छ। कोठा पनि मूलतः जापानी शैली को हो। किनकि टाटामी म्याट राखिएको छ, तपाईं भुँइमा रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो एक उच्च श्रेणीको र्योकन हो, साँझमा, एक लिपिक तपाईंको कोठामा आउँछन् र एक फ्युटन राख्छन्। कृपया तपाईंको futon संग सुत्न यदि यो सस्तो RYokan छ भने, आफ्नो futon आफैंमा फैलिएको संग सुत्नौं।
RYokan सार्वजनिक स्नान छ। लक्जरी र्योकन एक धेरै राम्रा सार्वजनिक स्नान सुविधा। अतिथिहरूले मूल रूपमा यी सार्वजनिक स्नानहरू प्रयोग गर्छन्। लक्जरी Ryokan को मामला मा, अतिथि कोठा पनि राम्रो स्नान छ। जापानी स्नानमा बाथटबको अलावा शरीर पनि धुने ठाउँ छ।
र्योकन मूलतः बेलुकाको खाना र बिहानको खाजा हुन्छ। तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नो कोठामा खानु हुनेछ।
सामान्यतया, कुनै चिप आवश्यक छैन। जहाँसम्म, केहि जापानी पाहुनाहरू लक्जरी RYokan मा रहनका लागि स्टाफलाई (Nakai- सान) जो उनीहरूको कोठाको प्रभारी छन्।
र्योकन कोठा धेरै जापानी शैली कोठा हो, र साँझ, "futon" टाटामी म्याट मा राखिएको छ = शटरस्टक
जापानी रयोकन ब्रेकफास्ट भाँडालगायत पकाएको सेतो चामल, ग्रिल गरिएको माछा, फ्राइड अण्डा, सूप, मेन्टाइको, अचार, समुद्री शैवाल, तातो प्लेट, अर्को छेउको व्यञ्जन र काठको टेबलमा हरियो चिया, जापान = स्गुटरस्टक
धेरै Ryokan ठूला सार्वजनिक स्नान स्थलहरु छन्। तातो वसन्त क्षेत्रमा रियोकन लक्जरी तातो वसन्त सुविधा = शटरस्टकको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दछ
यदि तपाईं प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल वा स्पा रिसोर्टहरूमा जानुहुन्छ भने, तपाईं लक्जरी र्योकनमा बस्न सक्नुहुन्छ। टोकियोमा, त्यहाँ नयाँ अपस्केल RYokan होशिनोया ओटेमाचीमा छ।
लक्जरी र्योकन स्वादिष्ट व्यंजन र विलासी स्नान केन्द्रित छ। तपाईं आफ्नो कोठामा त्यस ठाउँको स्वादिष्ट खाना खान सक्नुहुन्छ। र तपाईं आफ्नो शरीर र दिमागलाई ठूलो स्नानद्वारा निको पार्न सक्नुहुन्छ।
उच्च श्रेणीको र्योकनसँग प्रत्येक कोठाको लागि प्रभारी कर्मचारी छन्। तिनीहरू मध्ये धेरै जसो महिला हो, तिनीहरूले किमोनोस लगाइरहेका छन्। तिनीहरू जापानी मा "Nakai- सान" भनिन्छ। नाकाइ-सानले तपाईंलाई तपाईंको कोठामा निर्देशित गर्दछ र तपाईंलाई पहिले जापानी चिया दिनेछ। Nakai- सान तपाईंको कोठामा खाना बोक्छ। बेलुका, Nakai- सान बाहेक, एक महिला मालिक (Okami) एक किमोनो लगाएको तपाईंको कोठामा आउँछ र तपाईंलाई अभिवादन गर्दछ। कृपया उनीहरूसँग कुरा गर्न रमाईलो गर्नुहोस्। जब तपाईं र्योकान छोड्नुहुन्छ, तिनीहरूले तपाईंलाई ढोकाको ढोकामा देख्नेछन्।
जापान मा धेरै अनौपचारिक Ryokan छन्। सायद, यी Ryokan पुरानो जापानी आवास को उपस्थिति को सब भन्दा उत्तराधिकारी हुन सक्छ।
ती Ryokan मा, त्यहाँ कोठा प्रति Nakai- सान छ। कर्मचारीहरूले रातमा तपाईंको फ्युटन राख्दैनन्। जे होस्, र्योकानको मालिक र कर्मचारीहरू धेरै नजिक छन्, त्यसैले तपाईं उनीहरूसँग कुरा गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू अ at्ग्रेजीमा राम्रो नहुन सक्छ, तर तिनीहरू पक्कै तपाईंसँग राम्रो विश्वासका साथ कुरा गर्छन्।
यी Ryokan मा, नुहाउन यति ठूलो हुनु हुँदैन। जब नुहाउने सानो हुन्छ, पाहुनाहरूले नुहाउनको क्रममा लिन्छन्। हुनसक्छ तपाईं नुहाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैले, तपाईं नुहाउन सक्नुहुन्छ।
जापानमा एयरबएनबी प्रयोगकर्ताहरू बढ्दै छन्
जापान मा, तपाइँ एक निजी घर मा रहन सक्नुहुन्छ। निजी घरहरू जहाँ पाहुनाहरू बस्न सक्छन् उनीहरूलाई "मिन्शुकु" भनिन्छ। मिन्शुकुको अर्थ जापानीमा "होम इनान" हो। विगतमा किसानहरू र अरूहरू मिन्शुकु सञ्चालन गर्थे।
धेरै Minshuku JTB रूपमा ट्राभल एजेन्ट संग सम्झौता छैन। त्यसो भए, तपाईं मिन्स्कुकु ट्राभल एजेन्सीहरूको आरक्षण साइटहरूमा फेला पार्न सक्नुहुन्न। यद्यपि, मिन्सुकु जुन एयरबएनबी मार्फत बुक गर्न सकिन्छ हालै बढिरहेको छ। तपाईं Mnshuku मा एक airbnb प्रयोग आवास आरक्षण गर्न सक्नुहुन्छ।
Airbnb मा, त्यहाँ धेरै मिन्स्कुकु प्रकारहरू छन् जसले निजी कोठा भाँडा दिन्छन्। म निश्चित छुइन कि म तिनीहरूलाई "Minshuku" कल गर्न सक्दछु। जे भए पनि, एयरबएनबीले तपाईंलाई जापानमा अन्य कुनै देशहरूजस्तो उचित सुविधायुक्त आवासहरू फेला पार्न अनुमति दिन्छ।
रोमान्टिक पर्यटक जोडीहरू रातभर ग्याशो-जुकुरी फार्महाउस होमस्टे, मिन्सुकु, परिवार दौड, जापानी शैलीको बासस्थान, शिराकागो गाउँ, गिफु, जापान = शटरस्टकमा बस्छन्।
तपाईं परम्परागत जापानी घरहरूमा रहन सक्नुहुन्छ। सायद सबैभन्दा लोकप्रिय Shirakawago मा Minshuku हो। Shirakawa-go केन्द्रीय होन्शुको Gifu प्रान्तको एक सुन्दर पहाडी गाउँ हो। किनभने त्यहाँ धेरै हिउँ परेको छ, शिराकावागोका घरहरूमा छाना छाना छ। तपाईं किन यो अनौंठो घरमा बस्नुहुन्न र जापानी पहाडी गाउँहरूको जीवनको अनुभव गर्नुहुन्न?
>> Shirakawa- मा Minshuku को विवरणको लागि, कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
जापान मा ग्रामीण गाउँहरु मा अन्य धेरै आकर्षक Minshuku छन्। उदाहरण को लागी, क्योटो प्रान्त मा मियामा-चो मा पनि ती थचहरु संग धेरै अद्भुत Minshuku छ।
>> मियामा टाउनमा मिन्सुकुको विवरणहरूको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
मेरो मनपर्ने Minshuku दाराकु-सो Okuizumo-cho, Shimane प्रान्तको पहाडहरूमा छ। यो Minshuku निर्माण को 250 वर्ष को soched घर प्रयोग गरीरहेको छ। कृपया तपाइँको मनपर्ने Mnshuku सबै माध्यम बाट फेला पार्नुहोस्!
साईजेनिन मन्दिर, कोरीडोर र भित्री, वाकायामा प्रान्त, जापान = एडोबस्टक
Shukubo मन्दिर र मन्दिरहरूमा आवास सुविधा छ। विगतमा, यो अभ्यास र उपासकहरूको लागि व्यवस्थित गरिएको थियो। आज, पर्यटकहरू केहि शुकुभोमा बस्न सक्छन्।
यदि तपाईं शुकुबोमा बस्नुहुन्छ भने, तपाईं मन्दिर र मन्दिरहरू यति नजिक महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं जेन ध्यान र ट्रान्सक्रिप्शन अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ।
यद्यपि शुकुबोका बिभिन्न प्रकारहरू छन्। केहि शुकुबो आधुनिक भवनहरू हुन्। यदि तपाईं परम्परागत जापानी घरमा बस्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया जानकारी स collect्कलन गर्नुहोस्।
विदेशी पर्यटकहरूमा सबैभन्दा लोकप्रिय शुकुबो भनेको कोयासन, वाकायामा प्रान्तमा अवस्थित सुविधा हो। कोआसनसँग विभिन्न प्रकारका शुकुबो छन्। तातो स्प्रि withको साथ शुकुबो पनि छन्। कृपया तल आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्।
>> कोयासनको शुकुबोका विवरणहरूको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
तपाईं माथिको आधिकारिक वेबसाइटमा आवास बुक गर्न सक्नुहुन्छ। हालसालै तपाईले शुकिंगो बुक गर्न सक्नुहुन्छ Booking.com जस्ता बुकिंग साइटको साथ।
"आवास" मा फर्कनुहोस्